this morningနှင့်ပတ်သတ်သော ရှင်းလင်းချက်နှင့်အဖြေမှန် ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
this morningနှင့်ပတ်သတ်သော ရှင်းလင်းချက်နှင့်အဖြေမှန်
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Friday, July 22, 2016 LearningEnglish No comments
" I took two aspirins ........... this morning."ဆိုပြီး "this morning"ရဲ့ရှေ့မှာ ဖြည့်ရမယ့်Prepတွေကိုပေးထားခဲ့ပါတယ်။ အများစုက"in" ကိုသုံးကြပြီး "since"ကိုရွေးထားကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ အဖြေမှန်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။
မှတ်သားပေးရမှာက "this morning"ဆိုတဲ့ စကားစုဟာ "yesterday"တို့ "today"တို့ "last night"တို့လို့ Advတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုAdvတွေရဲ့ရှေ့မှာ "in, on, for, since, at"စတဲ့ Preposition တွေကိုထည့်သုံးပေးလို့မရပါဘူး (Eg. I saw you last night.) "I saw you at last night."လို့သုံးလို့မရပါဘူး။
ဒါကြောင့် အခု "this morning"ရဲ့ ရှေ့မှာလည်း ဘာမှထည့်ပေးလို့မရပါဘူး။ သို့သော် "this morning"ရဲ့ရှေ့မှာ "in"ထည့်သုံးတာကိုတွေ့ဖူးကောင်းတွေ့ဖူးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာငြင်းခုန်စရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့အတွက်ချွင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ မှတ်ထားရမှာက "this morning"ရဲ့ရှေ့မှာ "in"သုံးထားတာကိုတွေ့လာခဲ့ရင် ဒါ"this morning"အတွက် ရှေ့ဆက်အဖြစ်သုံးတာမဟုတ်ပဲ သူ့ရှေ့မှာရှိနေမယ့် Verbတစ်ခုခုရဲ့ နောက်ဆက်Prepဆိုတာသိရပါမယ်။ (Eg. I could have slept in this morning.) ဒီSentenceမှာဆိုရင် "this morning"ရဲ့ရှေ့မှာ "in"ကိုအသုံးပြုထားတာတွေ့ရပါမယ်။ ဒါကို "in"သည် "this morning"ကိုရည်ညွှန်းပြီးသုံးထားတာမဟုတ်ပဲ "sleep in"ဆိုပြီး Phrasal Verbကြောင့် ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရပါမယ်။ (sleep in= remain asleep or in bed later than usual.)ဖြစ်ပါတယ်။
*****I took two aspirins this morning.*****ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Chaw Ei Ei Bo
အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ ဖေ့ဘွတ်မှ ကူးယူဖြော်ပသည်။